Banyere Anyị - Shenzhen Sihai Packaging Ihe Co., Ltd.
Shenzhen Sihai nkwakọ ngwaahịa
Ihe Co., Ltd.
Shenzhen Sihai Packaging Ihe Co., Ltd. bụ a emeputa nke p oghere oghere mpempe akwụkwọ nkwakọ ngwaahịa na Shenzhen China, anyị nwere ihe karịrị afọ 12 na pp efere mpempe akwụkwọ, p oghere oghere, p corrugated mpempe akwụkwọ (makwaara dị ka p corflute mpempe akwụkwọ, p coroplast mpempe akwụkwọ , pp oghere osisi) ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa. P corrugated mpempe akwụkwọ, p oghere mpempe akwụkwọ bụ a ọhụrụ mbukota ihe onwunwe ga-eji na nile di iche iche nke ọrụ, na p osisi bụ a mgbanwe mbukota ihe nwere ike ọ bụla size, ọ bụla udi na ahaziri imewe mbukota ngwaahịa.
Anyị na-pụrụ iche na imewe, mmepe, mmepụta na ọrụ nke p corrugated mpempe akwụkwọ, p oghere mpempe akwụkwọ, p igbe, p corrugated igbe, p nkebi, p corflute ịrịba ama, mgbasa ozi osisi, karama oyi akwa na mpe mpe akwa, cargos oyi akwa na mpe mpe akwa na ndị ọzọ mbukota na mbupu ngwaahịa karịrị afọ 12. Anyị na ngwaahịa na-ọtụtụ-eji nkwakọ, obibi, ngwa, nyefe igbe, ìhè-oru ígwè, ahịa ọgwụ, pesticide, mgbasa ozi, mma, omenala isiokwu na biologic engineering.
Companylọ ọrụ anyị nwere ahịrị mmepụta mpempe akwụkwọ 3 dị elu, nke nwere ike mepụta pp oghere osisi nke nkọwa dị iche iche na ọkpụrụkpụ nke 2mm-12mm, obosara kachasị nke 2300mm na ogologo na-akparaghị ókè, yana mmepụta kwa ọnwa nke ihe karịrị 120 tọn.
Anyị isi na ngwaahịa ndị eyi oghere mpempe akwụkwọ, nile di iche iche nke na agba na ọkpụrụkpụ p oghere oghere mpempe akwụkwọ (p corrugated mpempe akwụkwọ), oyi akwa na mpe mpe akwa, nkebi kaadị, ntụgharị igbe na mgbochi static oghere mpempe akwụkwọ, ESD mbukota ngwaahịa. The ngwaahịa na-ọtụtụ-eji electronic ngwa, ngwaike plastic, home mma, mgbasa ozi mma, mkpụrụ osisi na akwukwo nri nkwakọ, akpa, nwa e ji ebu ihe, na akpaaka akụkụ, iko canning na ndị ọzọ ọrụ.
Anyị nwere ọkachamara otu, nlezianya management, magburu onwe akụrụngwa ike elu àgwà ngwaahịa. Anyị bụkwa ndị na-ebubata ngwaahịa ogologo oge maka otu TCL na HUAWEI. Anyị nwekwara ọrụ OEM na ODM, ọrụ OEM na ODM na-akwado ndị ahịa. Kwalite afọ ojuju ndị ahịa na ịtụ anya ihe ndị ahịa na-atụ anya bụ nkwa dị mkpa nke ụlọ ọrụ Sihai. Nye anyị ohere iji gosipụta ihe anyị nwere ike imere gị site na ịkpọtụrụ anyị maka nnabata n'efu.